Tazony ny etika poker - Финансовый форум | Всё про деньги, финансы, инвестиции, заработок
Форум о заработке и инвестициях	Список форумов Форум об инвестировании Доверительное управление
Tazony ny etika poker
Сообщение Yortvandy8899 » 14 янв 2020, 19:18
Poker, mitovy amin'ny kilalao casino mahazatra, dia mila ny mpilalao mba hanaraka ny fitsipika fampiasana sasany raha eo amin'ny latabatra. Tsy toy ny lalao mety hiseho toy ny craps sy roulette, ny poker dia kilalao fisainana satria ny mpilalao dia tsy maintsy mamaky am-pitiavana ny mpanohitra ary mahazo ny fampahalalana indrindra avy amin'izy ireo. oppa888.com
Alohan'ny hidiranao amin'ny lalao poker, tsy maintsy manontany tena aloha ianao: "" Mpanao atleta tsara ve aho? "" Raha ny valiny dia "" tsia "dia tokony handinika indray ny fitondran-tenany ny olona ary hanomboka hanaraka torolàlana ankapobeny momba ny asa izay hanampy azy ireo hitazona ny fitsipi-pitondran-tena mety. Farafaharatsiny raha te hisoroka ho lasa adala sy fanatanjahantena ratsy izy ireo. Amin'ny farany, ny poker dia kilalao milalao amin'ny vondron'olona, ​​noho izany dia tsara ny manandrana mamita azy amin'ny fomba milamina miaraka amin'ireo mpilalao hafa.
Manaja am-panajana ny mpilalao
Ny iray amin'ireo fitsipika fototra amin'ny filalaovana poker izay tokony harahina dia ny fahatsoram-po hatrany amin'ny mpifanandrina aminao. Tokony hifanaja (Afa-tsy ny pun) amin'ny latabatra poker, azo atao ny milomano sy manao ny marina miaraka amin'ireo mpifanandrina aminao, raha mitazona fahalalam-pomba miaraka amin'izany. Ireo izay niharihary fa nanompa, am-bava sy nampitahorana dia tsy tsara ho an'ny mpilalao namany ary inoana fa tsy nasaina hiverina eo amin'ny latabatra nilalao izy ireo.
Ny fanetren-tena rehefa mandresy dia lafin-javatra iray momba ny fitsipi-dikan-tsakafo tsara amin'ny resaka poker ianao. Mandeha dia tsy miteny hoe misy izany Zara raha tsy misy olona eto amin'izao tontolo izao te hanary ny tanany ary miteny hoe "" veloma "" potavy tsara. Raha mpandresy ianao dia andramo hanao izay fara herinao mba hahazoana fahafaham-po sy diniho ny fomba. Inona no mety ho tsapanao raha mahazo zavatra iray niafara sy very ianao?
Ankoatr'izay, amin'ity toe-javatra ity dia heverina ho tsirony ratsy ny fanerena ny mpilalao, ny mpiara-miasa hotazona ny tanany ho an'ny squat bebe kokoa, ka raha tsy vonona ny hanao an'ity fanamarihana ity Karatra fantsakana miaraka amin'ireo namany mpifaninana aminy raha mbola mijanona izy ireo.
Ataovy tsara ny karatra.
Mihatra ny fitsipika avy any ambony rehefa miresaka momba ny fihetsikanao amin'ny solaitrabe ianao rehefa mandevina ilay karatra. Izany dia satria ny fihetsikareo dia mety hanome fampahalalana bebe kokoa amin'ny mpilalao izay mbola eo am-pelatanana mba hahafahan'izy ireo mizaka ny valiny tadiavina.
Miaraka amin'ny fahaiza-manao manokana ho an'ny zavatra rehetra, ny fifororanana ary ny tanana iray dia tsy hain-tany. Rehefa miforitra dia tokony hilalao am-pitandremana tsara ao anaty vay ny mpilalao ary mandroaka hisorohana ny karatra voalohany na roa manatrika. Raha mahita an-tsary ny karatra izay natoronao ny mpilalao, izay hahazo tombony tsy miangatra.
Ny spins miadana dia iray amin'ireo zavatra mety hataonao amin'ny latabatra poker ary heverina ho ratsy fambara. Na dia tsy misy fitsipika voafaritra aza izay mandrara io hetsika io Tokony hialàna izany satria mampitombo ny filalaovana tsy ilaina amin'ny lalao izany ary manelingelina ny mpilalao namany
Io teny io dia ampiasaina isaky ny mino ny mpilalao fa manana ny tanana tsara indrindra eo an-databatra na "" voan-kafe "" dia minia manemotra ny famoahana ny karatra lavaka mandritra ny fandefasana na tsy ho ela izy ireo, mba hahafahana mandresy ny mpilalao izay mihazona tanana vitsivitsy. Fomba mety (Ary tsy mety), ka ny kardinao mandritra ny fifaninanana dia mamadika ny karatra avy hatrany
Miandry ny fihodinana ary miaro ny tananao foana.
Ny fanamarihana kosa, amin'ny lafiny iray, dia fomba iray hafa hitazonana ny etikety mety eo amin'ny latabatra poker. Ny mpilalao dia manoro hevitra ny hisorohana ny fidirana am-bolany na hanidy ny karatra alohan'ny hanaovana azy ireo. Tokony hiandry mandra-pahatonga azy amin'ny maso ary avy eo dia hanambara fa te-hanara-maso, hiantso ny betoka, vala ary hiakatra
Ny mpilalao tsirairay dia tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny karapan'izy ireo araka izay tratry ny fahaizany. Rehefa manome karatra roa ianao dia tsy tokony haka azy ireo na hanala azy ireo eo ambony latabatra. Tokony miala sasatra ny karatra. Ny endrika tsara dia milaza fa tokony mitazona karatra roa amin'ny tanana iray ianao ary mihodina amin'ny zoro kely. Tsy izay ihany no tokony hizaha ny karatra indray mandeha indray ary aza atao tsy hahita azy io matetika.